Mashiinka Dabaqa, Furimaha Dhulku, Mashiinka Sunta Sagxadda - Marcospa
MAXAA SABABANAGA DOORO
Suzhou Marcospa waxaa la aasaasay sanadkii 2008. Takhasus gaar ah u leh soo saarista mashiinka sagxadda, sida Booqday Furimaha Dagaalka, Mashiinka wax lagu nadiifiyo iyo kuwa wasakhda qaada. Waxyaabaha tayada sare leh, moodada, oo si ballaaran loogu isticmaalo noocyo kala duwan oo naqshadaha ah, ma aha oo kaliya tirada ballaaran ee suuqa iibka gudaha, laakiin sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa Yurub iyo Mareykanka.
Miisaaniyadda Marcospa sannadihii la soo dhaafay waxay had iyo jeer ku dhegan tahay "tayada wax soo saarka si ay u noolaato, kalsoonida iyo adeegyada horumarinta" ujeeddooyin ganacsi. Waxaa ka go'an inay ku siiso alaab tayo sare leh iyo adeegyo tayo leh. Hayso koox xirfadlayaal ah, u heellan maaraynta naqshadeynta kooxda, laga bilaabo naqshadeynta wax soo saarka, sameynta caaryada, wax u sameynta golaha wax soo saarka, dhinac walba iyo geeddi-socodyada ayaa si adag u tijaabinaya oo xakameynaya
Alaabtu waxay adeegsadaan tikniyoolajiyad si buuxda otomaatig u ah oo waxtar badan, adkeysi badan leh, waqti-badbaadinaysa oo habboon.
Isticmaalka tamarta wax soo saarka ayaa ka hooseeya, laakiin sidoo kale si loo ilaaliyo tayada miisaanka alaabada.
Heerarka tiknoolajiyada alaabada waxay noqdeen warshadaha, gaar ahaan warshadaha teknolojiyada sare, dhererka amarka.
Waxay heshay feejignaan badan oo warshadeed oo ku saabsan aqoonta iyo aqoonsiga muhiimka ah.
TS3000 unugyada soo saarista boodhka warshadaha hal ...
Taxane C5 saddex waji nooca industria nooca ...
Taxane FB saddex waji waji caddeyn vacuum cl ...
Sidee mashiinka xawaaraha xawaaraha sare ku ciyaara doorkiisa dabaqa shubka
Nidaamka dalabka ee mashiinka sifaynta xawaaraha sare ① Baadh xaaladda dhabta ah ee dhulka oo tixgeli baahida loo qabo in la xakameeyo dhibaatada ciida. Marka hore, ku dalbo walax daawo daaweyn dhulka si aad u xoojiso adkeysiga aasaaska dhulka. ② Adeegso 12 mashiinno culus oo culus iyo bir bir ...
Sida loo doorto Booqday Furimaha Dunida ee Booqday Furimaha Dagaalka
Waxqabadka mashiinka wax shiida ee dabaqa la taaban karo waxaa ka mid ah: balaadhinta ballac, xoqidda qaabka hawlgalka madaxa, xawaaraha wareegga, cadaadiska cutubka madaxa, xakamaynta mugga biyaha, iwm. Heerarka dhismaha ayaa loo qaybiyaa: flatness, hufnaan iyo dhalaal. 1. gr ...
Sida loogu isticmaalo mashiinka wax lagu shiido dhulka si loola macaamilo rinjiga dhulka ka hor dhismaha
Hubi oo hagaaji adhesion ee daaha rinjiga dhulka: Sunta la taaban karo ee salka la daweeyey waxay u oggolaan kartaa astaamaha rinjiga dabaqa inuu ku sii dhex qulqulo dusha sare ee la taaban karo, taas oo door muhiim ah ka leh nolosha nolosha dhammaan dahaadhka rinjiga dhulka. Gaar ahaan marka ay jiraan wasakhda saliida iyo biyaha saaran ...